Posted 12:23 PM by ကိုဇော် in
505 comment(s) to... “ရည်ရွယ်ချက်”
အခုပဲတွေ့လို့ ဝင်လာတယ် ကိုဇော်ရေ...
အခုလို အိုင်ဒီယာအတွက် ချီးကျူးမိပါတယ်။ နောက်ဆို ဘလော့တွေ ဒီမှာ အားလုံး စုပြီးသား ဖြစ်သွားမှာ သေချာတယ်။
C box မှာ စာရေးလို့ မရတာနဲ့ ဒီမှာပဲ ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်ဟာ မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ။ကျွန်တော် လင့်လည်း
ဒီမှာပဲ ပေးထားခဲ့ပါရစေ ...
ငြိမ်းစိုးဦး ၏ အက္ခရာ ရက်စွဲများ
စနစ်ကလေးတစ်ခု TEAM လေးတစ်ခု
လင့်ချိတ်ထားလိုက်မယ်ကိုဇော်ရေ...thank you naw.:D
ကောင်းလိုက်တာ ဒီမှာ လာစွလို့ ရသွားပြီ။
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ကို ဇော်ရေ။
ဘူမှန်တော့ မီးလဲမသိဘူး။ ကျတော်ကိုလဲ ဘူမှန်းသိဘူး မို့ လား။ ပျော်စရာကြီနော်။
ကိုဇော် ကျွန်တော်ဆီမှာ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ Cboxရေးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကျွန်တော်လင့်ကိုတင်ပေးပါ။ဒါကြောင့် ဒီမှာရေးတာပါ ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။http://decembermgmg.blogspot.com/
့https://www.shwephyulay.blogpost.comဆိုက်လေးမှာ အများစုအားပေးတာများတဲ့ ဘလောလေးတွေ တင်ပေးပါ...နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
စီဘောက်မှာ လင့်သာ ထားခဲ့ပါ။
ကျနော် အားတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ကို စီစစ်ပြီးတော့ ချိတ်ပေးပါ့မယ်။ ဘလော့အားလုံးကို မသိနိုင်တော့ ဒီလိုလေး လုပ်ပေးမှပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပါ။
mg myat thar said...
အကြံတော့ပေးစရာမရှိပါ။ အကြံဥာဏ်ယူင်္ပြ ပြန်သွားပါသည်။
ဘလော့ဂါများရဲ့ပို့စ်များ လုပ်ပေးထားတဲ့ အကြံဉာဏ် အတော်လေးကောင်းတယ် စာပေဝါသနာရှင်တွေအတွက် တစ်နေရာတည်းကို သွားရောက်လေ့လာ ဖတ်ရှုလို့ရအောင် ဒီလင့်ခ်လေး ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကြည်လင်အေးမြ ချမ်းသာသုခနဲ့ ပြည့်စုံပါစေကွယ်။
ကိုဇော်ရေ ခင်ဗျား လုပ်ကိုင်တဲ့ နည်းစနစ်တွေ သဘောကျပါတယ်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ကိုဇော်ရေ ကျွန်တော် လာလည်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ လင့်လေးကိုလည်း ချိတ်ပေးပါအုန်းနော်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်...။ ကိုဇော်
http://www.tayelay.co.cc ကနည်းပညာအတွ့်ပါ။ http://nys.tayelay.co.cc ကဘလော့ပါ။ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ပါ။ ချိတ်ပေးထားပါဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့ဂါဆိုဒ်ကလေးမှာချိတ်ထားမယ်ဗျာ။
စာရင်းထဲမှာ မတွေ့လို့ပါ ကိုဇော်
မိတ်ဆွေ တို့၏ ♣ လုပ်ငန်း ♣ ဆိုင် ♣ ကြော်ငြာ လို သော အ ကြောင်း အ ရာ များ ကို internet website စာ တစ်မျက် နှာ အ ပြည့် အခမဲ့
ကြော်ငြာ ♥ ထည့် ပေး နေ ပါ သည်
zaizailife.blogspot.com ကတော့ ပါခင်ဗျ
ကျွန်မရဲ့ ဆိုဒ်လိပ်စာလေးကို ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားလို့ ရပါလားရှင်။
http://netsoelay123.blogspot.com/ ဇာတ်ကားဆိုက်လေးဗျာ ကူညီပေးပါအုံး
စာတွေဖတ်ရင်း စမ်းသပ်ကြည့်နေတာပါခင်ဗျာ၊ စာဖတ်သလောက် ခရီးမရောက်သလိုပါဘဲ - ယခုလို အားတက်သရောလေး အားပေးဖော် - ကမ်းလှမ်းဖော်ရတာ ဒီနေ့ ပျော်စရာအတော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
http://gipsysokepalotefeelingcreation.blogspot.com/ ကူညီပေးပါဦးဗျာခုမှ စသုံးတဲ့သူမို့ ဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူး အကို မေးစရာတွေရောရှိပါတယ် အချိန်ရရင်နည်းနည်းလောက်သင်ကြားပေးပါလား
ရှေးဟောင်းပေတံလေး ရောင်းချင်လို့ ပါ
THALUN AUNG said...
ဆေးပညာရှင်များရဲ့ စကားဝိုင်းမှ အများပြည်သူကို အသိပေးချက်များပါ။ “ ဆေးလောက စကားဝိုင်း ” လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ပညာရှင်အများစုရဲ့ အမြင်လေးတွေပါ။
all share team said...
ကိုဇော် ကျနော့် ဘလော့ဂ် ကို နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ် ကျေဇူးပြုပြီး မိုးအိမ်မက် http://daugyungpost.blogspot.com/ကိုဖျက်ပြီး ဤလင့်
http://kachinnews.blogspot.com/ ကို အစားထိုးပေးပါ လေးစားလျှက်.. ကျေဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်လင့်ကလေးကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ချိတ်ပေးပါဦးခင်ဗျာ
The Spirit Fruit said...
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်လင့်ကလေးကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ချိတ်ပေးပါဦးခင်ဗျာ http://www.thespiritfruit.com
ကိုဇော် ရေ အရောက်လာလည်ခဲ့ပါ၏။ ယ္ခု.လို မြန်မာဘလော့ဂါတွေစုစည်းပြီးတနေရာထဲမှာ ဆုံစည်းခွင့် သဘောမျိုးနဲ့တနေရာထည်းမှာ ကြည့်ချင်သောဘလော့များ ကိုကြည့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးတာ ၀မ်းသာပါကြောင်း။ နောက်ပြီး ဦးဇင်းရဲ့ ကွန်ပြူတာ မှာ ပြဿနာလေးတွေရှိနေပါတယ်။
အသုံးပြုနေဆဲမှာ ပြဿနာလေးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးဆန်းကြီးတော့မဟုတ်သော်လဲ အသုံးပြုနေစဉ် တနေရာရာကို ရိုက်ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင် microsoft windows ဆိုသော ဘောက်လေးကျလာပြီး end process ကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ် ။ ၄င်းပြဿနာသည် မကြာမကြာဆိုသလို လုပ်ပေးနေရခြင်းကြောင့် ကိုဇော် သိရင် ပြောပြပေးပါလား.။
၁နှစ်ကျော်ကင်းကွာနေတဲ့ blogger ဟောင်းတဦးပါ
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီလင့်လေးကို ချိတ်ပေးပါဦးဗျာ...
သုတ၊ ရသ ဆိုင်ရာဘလော့လေးပါ...
ချမ်းချမ်းကအသစ်လေားမို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်းသိပ်မရှိလို့ ပါဒ
မင်္ဂလာပါကိုဇော်..အားလုံးအတွက် အကျိုးများစေမယ့် ကိုဇော့် Idea လေးကို ချီးခြူးပါတယ်...။ ကိုဇော်ဘလော့လေးမှာလဲ အလည်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်(ပြဿနာတွေဖြစ်တိုင်းဆိုပါတော့P) ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်လေးကိုလည်း ချိတ်ပေးစေချင်ပါတယ်..ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..။
ရွှေဆည်သား (ကျောက်ဆည်သား) http://shwesetharr.blogspot.com
Site လေးကိုလည်း Link ချိတ်ပေးအုံးနော်...။
Dhamma Mee Eain said...
ကိုဇော်ရေ ၀င်လာခဲ့တယ်နော်....အခုလိုစုပေးထားတော့ ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေတာပေါ့...ကျေးဇူးပါ....ကျွန်တော်လည်း လင့်ခ်လေးထားခဲ့ပါမယ်......
ဝင်လာပြီအကိုရေ အရမ်းလေးစားတယ်ဗျာ ။
လေးစားစွာဖြင့် ( မိုးနက်သားလေး )
sein myint maw said...
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကိုလဲ လင့်ချိန်ပေးလို.ရမလား။ www.tommygirllife.blogspot.com ပါ
ကျွန်းသား လင့်လေးကိုလည်း ချိပ်ပေးထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
မထိုင်တာမသုံးတာအတော်ကြာတော့အဆက်အသွယ်တွေပျတ် ဒါနဲ့ ပဲမရောက်ဖြစ်ဖြစ်မလာဖြစ်တာပါ
Regional News Agency said...
မာကလာပင် အဲဟုတ်ပါဘူး မင်္ဂလာပါခင်ဂျာ
Wow . .!!!! တော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာကို ခုမှ တွေ့မိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဆိုးတယ် . . . အရမ်းအားကျတာပဲ . . . လင့်ချိတ်ဖို့ထက် လေးစားမှုမိလို့. . . ခင်ချင်ပါတယ်...
ဘ၀ခြေရာ ( သုတ၊ ရသ ) ဆိုဒ်လေးပါဗျာ။
အကိုရေ ညီဘလော့လေးကိုလဲ လင့်ချိတ်ပေးပါဦး .....www.moenattharlay.blogspot.comပါ အကို ........
လေးစားစွားဖြင့် ( မိုးနက်သားလေး )
လုပ်ပါဦးဗျို နေရာထားမှာသွားလို့ ဘယ်က ပြန်ပြောင်းရမှန်းမသိတော့ဘူး ပြန်ဖြုတ်နဲနည်း လေပေးပါဦး ကိုဇော်ရေ
ဖရက်ရှာလေး ကွန်းဇော်ကိုလည်း ဘလော့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ကူညီမိတ်ဆက်ပေးပါဦး
ကြည်ဖြူ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးပါ အကို။ လင့်ချိတ်ပေးဖို့ လင့်လေးထားခဲ့ပေးပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းများ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့ရဲ့ ဆိုဒ်လေးကိုလည်း လင့်လေးချိတ်ပေးပါဦးဗျာ။ http://www.kophoaye.blogspot.com ပါ
http://en.justin.tv/directory/entertainment/movies?lang=en&order=hot&page=1 ရုပ်ရှင် ၂၄နာရီလာသောဆိုက်ဖြစ်ပါသည်..အားကစားတွေmusic တွေလည်းကြည့်ရပါသည်... မြန်မာပြည် star channel ပုံစံ မျိုးပါ...၂၄နာရီ အလားကားကြည့်ရသည်..connet မကောင်းရင် တော့ မပြောတတ်ပါ
ဘလော့ဂ်တွေ အတော်များများ တစ်နေရာထဲမှာ စုထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်လေးလည်း ကိုဇော်အချိန်ရတဲ့အခါ ချိတ်ပေးပါဦး။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကိုလဲ လင့်ချိတ်ပေးပါခင်ဗျား။ http://kosaihighlander.blogspot.com/
ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ ပညာရှိတဲ့ဘ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ကြဖို့ ပညာရှိသောဘ၀ လို့ အမည်ရှိတဲ့ ဆိုဒ် ကို
ကျေးဇူးပဲနော် ကိုကြီး ကျန်းမာပါစေဗျာ။
ကို လင့်ချိတ်ပေးပါလို့ ။
အစ်ကိုရေ ညီမ link လေးချိတ်ပေးပါနော်။
ကိုဇော် ခရစ်ယာန်သီချင်း စုစည်းတဲ့ ဆိုက်ပါ...ချိတ်လို့ရရင် ချိတ်ပေါနော်။
ကျွန်တော် ကိုဇော်ရဲ့စိတ်သဘောထားကို လေးစားပါတယ် ကျွန်တော်လည် ကိုလည် လင့်လေး တခုလောက်ပေး ချိတ်ပါနော် ကျေဇူတင်ပါတယ် mintinsoe@hotmail.com
ဒီလိုလူမျိုးတွေ များများရှိပါစေ..။ခုမှ စ လေ့ လာနေသူပါ..။ချိတ်ပေးဖို့ တောင်းဆို ပါတယ်။။ http://moeyateko.blogspot.com
အကိုကျွန်တော် လင့်လေးချိတ်ပေးပါ http://kyawkothein.blogspot.com
ကျွန်တော် ကအခုမှစတင်ရေးသားသူပါ ကြိုးစားနေဆဲပါ
မင်းလွမ်းနောင် (ပန်းတနော်) ပါ မင်္ဂလာပါဗျာည
http://www.yazawon.blogspot.com ကို ချိတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ
Sayadaw U Wunna said...
ဦးဇင်းရဲ့ ဘလောဂ့်လေးက အခုမှ စတင်တာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အပမ်းမကြီးဘူးဆိုရင် ချိတ်ပေးပါဦး.....ဦးဇင်းရဲ့ လင့်ခ်ကတော့-
အကိုရေ ကျနော်၇ဲ့ ဘလော့အသစ်လေးကိုလည်း
ကိုဇော်ရေ လင့်လေးချိတ်ပေးပါဦးဗျာ။ ကျေးဇူး အများကြီး
ကျနော့် ဆိုက်လေးကို Link ချိတ်ပေးပါရန်
saw chit thi ha said...
ကိုဇော်ရေ.. အလည်ရောက်လာပါတယ်.. ကျနော် ဘလောဂ်လေးလည်း လင့်ချိတ်ထားလိုက်ပါအုန်းနော်..။ ကျနော် ဘလောဂ်လေးက ကိုဇော်တို့ ဘလောဂါ အဘိဓာန်ကို ကြိုဆိုပါတယ်... ခင်မင်စွာဖြင့် သူငယ်ချင်း
ူlu wa gyi said...
ကိုဇော်ရေ.....ကျနော့် ဆိုက်လေးကို Link ချိတ်ပေးပါနော်
ှုIdea ကို ကြိုက်တယ်ဗျာ...
သက်ကြီးစာပေပညာရှင်များကို အခမဲ့ဆေးကုသပေး ရန်ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
Teeltui Von said...
ဒီလိုမျိုး ကုယ့် လူမျိုး တွေ အတွက် ကြိုးစားလုပ်ပေးတာ မင်္ဂံလာ အလုပ်ပါဗျာ...
ဒီဘလော့လေးအတွက် ကိုဇော့်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါ တယ်။ ညီမ အစ်ကို့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ပါ။ အခုတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့လေးတစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်။ အချိန် ရတဲ့အခါ လာရောက် လည်ပတ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ http://myawadezaw.blogspot.com လည်း လင့်ချိတ်ပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းပါရစေနော်။ ကျေးဇူးတင်လျက်...
အစ်ကကိုရေ အခုမှ ဘလော့ဂ်တွေကို လေ့လာနေတုန်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
http://alanka-panset.blogspot.com/ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီဘလော့လေးကိုလည်း လင့်ချိတ်ပေးပါဥိး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
please, I would like to link.
မိသားစု ( အနုပညာအိမ် )
သတင်းတွေကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တင်ပေးနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်
လုပ်ငန်း ဆိုက်လေူပါ။ လာလည်ကြဘို့ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကိုဇော်ရေ ကျွန်တော့် ဆော့ဝဲမြို့တော်လေးကိုလည်း
Author များကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်လျှက်ပါဗျာ
အခုမှ သိတာဆိုပေမယ့် ချိတ်ထားပါရစေ
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ခ်လးကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး ချိတ်ပေးပါခင်ဗျာ..
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို လင့်ခ်ချိတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ လူငယ်အကျိုးပြု စာပေများ အထူးသဖြင့် ဘာသာပြန်စာပေများ ရေးသားပြုစုပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ www.nla2012.blogspot.com ပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုဇော်ရေ လင့်ခ်လေးထားခဲ့မယ်နော် ချိတ်ထားပေးပါဦး။
ကိုဇော်ရေ...မင်္ဂလာပါ....ကျွန်တော့်ဘလော့ဆိုဒ်လေးလဲ ဒီမှာ လင့်ချိတ်ချင်လို့ပါ...ကူညီပါဦး နော်..ကျွန်တော့် မှတ်စုဘလော့ဆိုဒ်လေးက http://toobigg02.blogspot.com ပါ.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စိတ်ကူးကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ ... ။
Link ယူသွားပါတယ် ခင်ဗျာ ... ။
Latha Mobile 0945 000 1727 said...
http://kopaelay.blogspot.com/ ချိတ်ပေးပါ ကိုဇော် (ကိုပဲလေး)
အကိုရေဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ဆိုဒ်ကမွေလို့၇တာလေးတွေတင်ထားတာပါအားလုံးတွက်ပေါ့ ဆိုဒ်နာမည်က ရောသမမွှေလေ ကျေးဇူးပြုပြီးချိ်တ်ပေးပါနော် http://mgtharthar.blogspot.com/
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို ခင်မင်လေးစားလျှက်
အရင်လိပ်စာက ဘယ်လိုမှဖွင့်မရတော့လို့ 
ဒီလင့်လေးချိတ်ပေးပါအုံး ကိုဇော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကိုကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ဘလော့ကိုကော် လင့်ချိတ်ပေးပါဦး။
အားလုံး လို တ ရ ပါစေ
ဆရာကျွန်တော့်ကိုဆိုဒ်လေး လည်းချိတ်ပေးအုန်းနော် www.kaungmyatsoe.blogspot.com
ဘလော့ဂါရွာလေးပဲ၊ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ တနေရာတည်းမှာ အလွယ်တကူ အစုံကြည့်လို့ရသည်။
ရသစုံ ဆိုက်လေးပါ အဓိကတော့
ကိုဇော်ရေ..မိုးနတ်ရဲ့ လင့်လေးလဲချိတ်ပေးပါအုံးနော်...မိုးနတ်က အသစ်မို့ပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
ကျွန်တော့်ကိုဆိုဒ်လေး လည်းချိတ်ပေးအုန်းနော် http://www.itmanhome.blogspot.com
လင့်ချိတ်ပေးအုံးနော် အခု ကျွန်တော့်ဆိုဒ်
Naing Tun Oo said...
ကျွန်တော့်ရဲ့ blog address က
www.arkarkhitpaing.blogspot.com ပါ လင့်ချိတ်ပေးပါအုံး ...
English Intensity Class said...
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီလင့်လေးလည်း ချိတ်ပေးပါဦး အကိုရေ အမြဲအားပေးလျက်ပါ အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူလားတော့မမြောက်သေးဘူး။ သင့်ခွင့်ရှိရင် သင်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။
@by AUNG said...
ကျွန်တော်ရဲ့ ဘလော့လေးကိုလင့်ချိတ်ပေးပါဦး ခင်ဗျာ.
http://www.burmesenu.com/ (ဗမာအမျိုးသားအစည်းအရုံး) ကို လင့်လေး ချိတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
Free For Friend ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် Blog လေးကို Link ချိတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ ဘလော့လေးလည်း အားတဲံအခါလေးကျ ချီတ်ပေးပါအုံးဗျာ..ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားဆိုက်လေး.http://netsoelay123.blogspot.com/
ပရဟိတ အဖွဲ့စည်းလေးတစ်ခုပါ ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ
ကျနော်တို့ရဲ့ http://www.burmesenu.com/ ကို လင့်လေး ချိတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေး လည်းချိတ်ပေးအုန်းနော် http://www.itmanhome.co.cc/ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လင့်ခ် ချိတ်ပေးပါအုံးဗျာ... http://www.zombyard.net/ http://www.zombyard.net/ http://www.zombyard.net/ http://www.zombyard.net/
Link လေး ချိတ်ပေးပါခင်ဗျာ
အကြံပေးစရာ မရှိလို့အကြံယူပြီး ပြန်သွားတယ် ကိုဇော် ကျတော်မှာက ၀ဘ်ဆိုက် မလုပ်ထားသေးပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျတော်ရဲ့ nainglynnsoe50@gmail.com google+ ကို ကြောငြာ ပေးထားတာကိုတွေ့လိုက်တော့ ကျတော် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖိုတိုချော မင်းသား ကျတော်ရဲ့ nainglynnsoe50@gmail.com google+လင့်ချိတ်ပေးပါဦးဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဇော်
ကျွန်တော့် ဘလောက် ကို လဲ ထည့်ပေးစေချင်ပါသည်
ကြော်ငြာအား ကောင်းလှချည်လား ကိုယ့်ဆိုက်ကို သိပ်မကြော်ငြာချင်နဲ့ ကိုယ်က အားကိုးခံနိုင်လောက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိမှ သူများလာကြည့်မှာ တော်ကြာဟက်ခံနေရမှ ဒုက္ခတွေ့နေဦးမယ် မေတ္တာဖြင့် ပြောချင်းပါဗျာ။ ကျုပ်ကတော့ မကြော်ငြာခိုင်းဘူးနော် မျက်စိလည်လို့ လမ်းမှားလို့ ရောက်လာရင်တော့ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုနေပါ့မယ်..
ကြော်ငြာဆိုက်လုပ်တာ သိပ်မကြာပါဘူး blogspot.com ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး ဒီကလင့်တွေ အကုန်းချိတ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် ပိုတောင်အဆင်ပြေသေးတယ် တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ
kopeinlay နည်းပညာ said...